Ihe Onye Kraịst ọ bụla Kwesịrị Knowmara Banyere Mgbanwe Ndị Protestant
Paolo Tescione	Edere ya November 1, 2020 November 1, 2020
A maara Mgbanwe Okpukpe Protestant dị ka usoro mmegharị okpukpe nke gbanwere mmepeanya Western. Ọ bụ usoro narị afọ nke iri na isii kpatara nchegbu nke ndị ụkọchukwu na-akụzi eziokwu na nkà mmụta okpukpe dị ka Martin Luther na ọtụtụ ndị ikom nọ ya n'ihu na e hiwere Chọọchị na Okwu Chineke.
Martin Luther bịarutere na nkuzi nke ịmụrụ mmadụ ụra n'ihi na ọ na-echebara mkpụrụ obi mmadụ echiche ma mee ka a mata eziokwu nke ọrụ Onyenwe anyị Jizọs rụchara ma zuo oke, n'agbanyeghị ụgwọ ọ ga-efu. Ndị ikom dị ka John Calvin kwusara ozi ọma na Baịbụl ọtụtụ ugboro n’izu ma soro ndị pastọ nọ n’ebe dị iche iche dee akwụkwọ ozi ha. Ye Luther ke Germany, Ulrich Zwingli ke Switzerland ye John Calvin ke Geneva, Edinam Ukpụhọde ama atara asuana ke ofụri ererimbot.
Ọbụna tupu ndị ikom a nọ gburugburu ndị dị ka Peter Waldon (1140-1217) na ndị na-eso ụzọ ya na mpaghara Alpine, John Wycliffe (1324-1384) na Lollards na England na John Huss (1373-14: 15) na ndị na-eso ụzọ ya na Bohemia ha rụrụ ọrụ maka mgbanwe.
Ole ndị bụ ụfọdụ ndị dị mkpa na Ndozigharị Protestant?
Otu n'ime ndị kacha dị ịrịba ama nke Ndozigharị bụ Martin Luther. N'ọtụtụ ụzọ, Martin Luther, site n'iji ọgụgụ isi ya na ịdị na-ekwubiga okwu ókè mee ihe, nyere aka kpalite Ndozigharị ahụ ma tinye ya n'ọgba ọkụ n'okpuru ndị nche ya. Ntuchi ya gbara mkpụrụ akwụkwọ iri itoolu na ise ahụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ụka dị na Wittenberg na October 31, 1517, kpalitere arụmụka nke dugara n'ọchịchị ndị popu nke ụka Roman Katọlik. Ọmụmụ Akwụkwọ Luther dugara na esemokwu na Diet of Worms na Chọọchị Katọlik. Na Diet of Worms, ọ bụ onye ama ama kwuru na ọ bụrụ na ejighị nghọta dị mfe na Okwu Chineke mee ka ọ kwenye, ọ gaghị agagharị na na ya ga-akwụsị n'Okwu Chineke n'ihi na ọ nweghị ihe ọzọ ọ ga-eme.
Ọmụmụ Luther nke Akwụkwọ Nsọ dugara ya imegide ụka Rome n'ọtụtụ ihu, gụnyere itinye uche na Akwụkwọ Nsọ na ọdịnala ụka na ihe Akwụkwọ Nsọ na-akụzi banyere otu a ga-esi mee ka ndị mmehie bụrụ ndị ezi omume n'anya Onyenwe anyị site na ọrụ agwụla O zuwokwara Onyenwe anyi Jisos.Ihe ndi a Luther choputara na o bu onye ziri ezi site n’okwukwe nani na Kraist na ntughari Baibul n’asụsụ German mere ka ndi oge ya muta Okwu Chineke.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke ọrụ Luther bụ iji nwetaghachi echiche Akwụkwọ Nsọ banyere ọkwa nchụaja nke onye kwere ekwe, na-egosi na mmadụ niile na ọrụ ha nwere ebumnuche na ugwu n'ihi na ha na-efe Chukwu Onye Okike.
Ndị ọzọ gbasoro ihe nlereanya Luther nwere obi ike, gụnyere ndị na-esonụ:
- Hugh Latimer (1487–1555)
- Martin Bucer (1491–1551)
- John Rogers (1500–1555)
- Heinrich Bullinger (1504 afọ 1575)
Ndia nile na otutu ndi ozo rapuru akwukwo nso na amara di uku.
Na 1543, onye ọzọ ama ama na Ndozigharị ahụ, Martin Bucer, gwara John Calvin ka ọ dee akwụkwọ maka mgbagha maka ndozigharị eze ukwu Charles nke Ise n'oge nri ndị eze ga-ezute na Speyer na 1544. Bucer maara na Charles V gbara ya gburugburu ndị ndụmọdụ na-emegide mgbanwe na chọọchị ma kwenyere na Calvin bụ onye kachasị nwee ike ịgbachitere Ndozigharị ahụ ịgbachitere ndị Protestant. Calvino nabatara ihe ịma aka ahụ site na ide akwụkwọ mara mma The Necessity of Reforming Church. Ọ bụ ezie na arụmụka Calvin ekwenyeghị na Charles nke V, The Need to Reform the Church abụrụla ngosi kacha mma nke Reformed Protestantism e nwetụrụla.
Onye ọzọ dị nkatọ na Ndozigharị ahụ bụ Johannes Gutenberg, onye mepụtara igwe obibi akwụkwọ na 1454. presslọ obibi akwụkwọ ahụ kwere ka echiche ndị Ndozigharị gbasaa ngwa ngwa, na-eweta mmeghari ohuru n'ime Akwụkwọ Nsọ na n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ niile na-akuzi theka.
Ebumnuche nke mgbanwe Protestant
Ihe eji mara ndị Protestant Reformation dị n'okwu ise a maara dịka Solas: Sola Akwụkwọ Nsọ ("Akwụkwọ Nsọ naanị"), Solus Christus ("naanị Kraịst"), Sola Gratia ("naanị amara"), Sola Fide ("naanị okwukwe") ) Na Soli Deo Gloria ("ebube nke Chineke naanị").
Otu n’ime isi ihe kpatara Ndozigharị Protestant bụ iji ikike ime mmụọ eme ihe n’ụzọ na-ezighị ezi. Ikike kacha dị egwu nke Nzukọ-nsọ ​​nwere bụ Onye-nwe-anyị na mkpughe Ya e dere ede. Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịnụ ka Chineke na-ekwu okwu, ọ ga-agụ Okwu Chineke, ma ọ bụrụ na ha ga-anụ olu ya n’olu dara ụda, mgbe ahụ ha ga-agụpụta Okwu ahụ n’olu dara ụda.
Isi okwu nke Ndozigharị bụ ikike nke Onyenwe anyị na Okwu Ya. Mgbe ndi ndozighariri kwuputara na “Akwukwo Nso nani,” ha kwuputara mkpebi ha n’ikike n’akwukwo nso dika Okwu Chineke kwesiri ntukwasi obi, zuru ezu.
Ndozigharị ahụ bụ ọgba aghara nke ikike kwesịrị ibute ụzọ: Chọọchị ma ọ bụ Akwụkwọ Nsọ. Ndị Protestant anaghị emegide akụkọ ntolite nke ụka, nke na-enyere ndị Kraịst aka ịghọta mgbọrọgwụ nke okwukwe ha. Kama, ihe ndi Protestant putara site n’akwukwo nso bu na anyi n’atuzi aka na okwu Chineke na ihe nile o na akuzi nihi na anyi kwenyesiri ike na o bu okwu Chineke nke kwesiri ntukwasi obi, zuoro ya ma buru kwa ntukwasi obi. Site na Akwụkwọ Nsọ dịka ntọala ha, ndị otu Kraịst nwere ike mụta ihe n’aka ndị Fada theka dịka Calvin na Luther mere, mana ndị Protestant anaghị etinye ndị Fada ofka ma ọ bụ ọdịnala Churchka n’elu Okwu Chukwu.
Ihe dị mkpa na Ndozigharị bụ ajụjụ a bụ isi nke onye nwere ikike, Pope, ọdịnala ụka ma ọ bụ kansụl ụka, mmetụta onwe onye ma ọ bụ naanị Akwụkwọ Nsọ. Rome kwuru na ikike ụka dị iche iche kwụgidere otu akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ọdịnala n’otu aha, ya mere nke a mere ka Akwụkwọ Nsọ na popu nwee otu ọkwa Akwụkwọ Nsọ na kansụl ụka. Ndozigharị nke ndị Protestant chọrọ iweta mgbanwe na nkwenkwe ndị a site n’itinye ikike naanị site n’Okwu Chineke.nji obi ike nye Akwụkwọ Nsọ naanị na-eduga na ịchọtakwa nkuzi nke amara, n’ihi na nloghachi ọ bụla n’ime Akwụkwọ Nsọ na-eduga na nkuzi nke ọbụbụeze. nke Chineke na amara nke nzoputa Ya.
Ihe si na mgbanwe pụta
Chọọchị na-achọkarị Ndozigharị gburugburu Okwu Chineke.Ọbụla na Agba Ọhụrụ, ndị na-agụ Akwụkwọ Nsọ na-achọpụta na Jizọs baara Pita na Pọl mba site na ịgbazi ndị Kọrịnt na 1 Ndị Kọrịnt. N'ihi na anyị bụ, dịka Martin Luther kwuru n'otu oge ahụ, ma ndị nsọ ma ndị mmehie, ma iska jupụtara na mmadụ, peopleka na-achọ Ndozigharị oge niile n'okwu Chineke.
N’akụkụ ala Anyanwụ ise bụ ahịrịokwu Latin bụ Ecclesia Semper Reformanda est, nke pụtara “ụka ga-agbanwe onwe ya oge niile”. Okwu Chineke adighi n’ebe ndi nke Chineke n’otu n’otu, kamakwa n’otu. Chọọchị agaghị agha naanị ikwusa Okwu kama na-ege Okwu ahụ ntị mgbe niile. Ndị Rom 10:17 kwuru, "Okwukwe si n'ịnụ na ịnụ site n'okwu Kraist."
Ndị ndozigharị ahụ bịara na nkwubi okwu ha mere ọ bụghị naanị site n’ịmụ ndị Fada theka, bụ ndị ha nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere ha, mana site n’ịmụ Okwu Chineke. .ka n’oge Ndozigharị ahụ, dịka ọ dị taa, chọrọ Ndozigharị ahụ. Ma Michael Horton ziri ezi mgbe ọ na-akọwa mkpa ọ bụghị naanị ịnụ Okwu ahụ n'otu n'otu dị ka mmadụ ma n'ozuzu ya n'ozuzu ya mgbe ọ na-asị:
“N’onwe ya na n’otu nzukọ, a mụrụ ụka ma na-eme ka a dị ndụ site n’ige ntị n’ozi ọma. Chọọchị na-anata ezigbo onyinye Chineke mgbe niile, yana mgbazi ya. Mmụọ Nsọ anaghị ekewapụ anyị na Okwu ahụ mana ọ na-akpọghachite anyị na Kraịst dịka ekpughere ya n’Akwụkwọ Nsọ. Anyị kwesịrị ịlaghachi azụ n’olu Onye Ọzụzụ Atụrụ anyị mgbe niile. Otu ozioma nke na-eke ụka na-akwado ya ma na-emekwa ka ọ dị ọhụrụ “.
Ecclesia Semper Reformanda Est, kama ịbụ onye na-egbochi ya, na-enye ntọala maka ịdabere na Anyanwụ Ise. Chọọchị dị adị n'ihi Kraịst, ọ dị n'ime Kraịst ọ bụkwa maka mgbasa nke ebube Kraịst. Dị ka Dr. Horton gara n'ihu ịkọwa:
“Mgbe anyị na-akpọku ahịrịokwu ahụ dum - 'ụka a gbanwere agbanwe na-eme mgbanwe mgbe niile dịka okwu Chineke si dị' - anyị na-ekwupụta na anyị nọ na chọọchị ahụ na ọ bụghị naanị onwe anyị nakwa na ụka a na-agbanwe ma na-eme ọhụụ site na Okwu Chineke kama karia site na mmuo nke oge “.
Ihe 4 Ndị Kraịst kwesịrị ịma banyere ndozigharị ndị Protestant
1. Mgbanwe Protestant bụ mmegharị mmegharị iji dozigharia toka n’okwu Chukwu.
2. Ndozigharị nke ndị Protestant chọrọ iweghachi Akwụkwọ Nsọ na chọọchị na ebe bụ isi nke ozioma na ndụ ụka ụka.
3. Mgbanwe ahụ mere ka a mata mmụọ nsọ ọzọ. Dị ka ihe atụ, a maara John Calvin dị ka ọkà mmụta okpukpe nke Mmụọ Nsọ.
4. Ndozigharị ahụ na-eme ka ndị nke Chineke dị obere ma bụrụkwa onye na ọrụ nke Onyenwe anyị Jizọs dị ukwuu, Augustine kwuru otu oge, na-akọwa ndụ ndị Kraịst, na ọ bụ ndụ nke ịdị umeala n'obi, ịdị umeala n'obi, ịdị umeala n'obi, na John Calvin kwughachiri na nkwupụta.
Anyanwụ ise adịghị mkpa maka ndụ na ahụike nke Chọọchị, kama ọ na-enye okwukwe na omume ezisa ozi ọma siri ike na nke ezigbo. Na Ọktọba 31, 2020, ndị Protestant na-eme mmemme Onyenwe anyị na ndụ na ozi nke ndị ndozi ahụ. Ka ihe nlereanya nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị bu gị ụzọ kpalie gị. Ha bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị hụrụ Okwu Chineke n’anya, hụ ndị Chineke n’anya, ma chọsie ike ịhụ mmeghari ohuru n’ime Nzukọ-nsọ ​​maka otuto nke Chineke.Ka ihe nlereanya ha gbaa ndị Kraịst ume taa ikwusa ebube nke amara Chineke nye mmadụ niile. , n’ihi ebube ya.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ndị-nsọ nyere anyị ihe nlere ịgbaso, ịgba ama nke afọ-ọma na ịhụnanya
Next Post → Post ozo:Nsọpụrụ ụbọchị: nkuzi na nchekwa nke ndị nsọ